merolagani - टेलिकमको नाफा १५.२५ प्रतिशतले घट्यो, जगेडाकोषमा ९० अर्ब
टेलिकमको नाफा १५.२५ प्रतिशतले घट्यो, जगेडाकोषमा ९० अर्ब
Feb 12, 2019 Merolagani
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (NTC) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ६ अर्ब ३४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गतवर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद नाफा एक अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात १५.२५ प्रतिशतले घटेको हो ।
गतवर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल दुरसञ्चारले ७ अर्ब ४८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीको सेवा बिक्री बापतको आम्दानी घटेपछि नाफा घटेको देखिन्छ । यस त्रैमासमा कम्पनीले १८ अर्ब ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सेवा बिक्रीमार्फत आम्दानी गरेको छ । यो गतवर्षको तुलनामा एक अर्ब २६ करोड २२ लाख कम हो । गतवर्ष कम्पनीले १९ अर्ब ७० करोड ६४ लाख रुपैयाँ सेवा बिक्रीबाट आम्दानी गरेको थियो ।
कम्पनीले यस अवधिमा २१ अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गरेको छ । गतवर्ष कम्पनीले २२ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गरेको थियो ।
समीक्षा अवधिसम्ममा कम्पनीले १२ अर्ब ६० करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गतवर्षको तुलनामा २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँले खर्च बढेको छ । गतवर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले १२ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चुक्ता पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ९० अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आउँदा प्रति शेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ २२ पैसाले घटेको देखिन्छ । कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ८४ रुपैयाँ ५५ पैसा छ । गतबर्ष कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ९९ रुपैयाँ ७७ पैसा थियो । कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ ७०६ रुपैयाँ ६७ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ८.७५ गुणा बढी छ ।
नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट प्रति शेयर ५५ रुपैयाँ लाभांश दिने
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस
आइतबार दिउँसाे देखि यस कारण लागेन नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा फोन
नेपाल टेलिकमको व्यापार खस्कदा पनि कसरी भयो नाफामा सुधार ?
सेयर बजारको सबैभन्दा बलियो कम्पनीको यस्तो आयो प्रगति विवरण
नेपाल टेलिकम धरहरा पुनःनिर्माणबाट पछि हट्यो
जापान सरकारको ३० करोड ८० लाख अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्रीपरिषदकाे निर्णय
Jul 02, 2020 05:24 PM
मन्त्रीपरिषदको असार १५ गते बसेको बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारको प्रदान गर्ने ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी गराएका हुन्।
'अधिवेशन स्थगन,दल दर्ता र शितल निवास धेरै धाएर ओलीले व्लाकमेलिङ गरिरहेका छन्'
Jul 02, 2020 04:55 PM
नेपालमा ४९ दिने शिशुको कोरोना संक्रमणका कारण निधन
Jul 02, 2020 04:53 PM
एनआइसी एशिया लघुवित्तको आइपीओ आइतबार बाँडफाँड हुने, कतिजनाले पाउलान् २० कित्ता?
Jul 02, 2020 04:47 PM
काठमाडौं उपत्यकाका ३२ जना सहित ४७३ जना कोरोना संक्रमित थपिए
Jul 02, 2020 04:37 PM
संसदकाे बजेट अधिवेशन सकियो
Jul 02, 2020 04:23 PM